Shilalekha » माधव नेपालप्रति कोमल वलीको कविता कटाक्ष: छेपाराजस्ता रंग बदल्ने बाँदरको स्थायी परिवेश हुँदैन ! माधव नेपालप्रति कोमल वलीको कविता कटाक्ष: छेपाराजस्ता रंग बदल्ने बाँदरको स्थायी परिवेश हुँदैन ! – Shilalekha
माधव नेपालप्रति कोमल वलीको कविता कटाक्ष: छेपाराजस्ता रंग बदल्ने बाँदरको स्थायी परिवेश हुँदैन !
२१ असार २०७८, सोमबार २१:०८
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की नेतृ एवम् राष्ट्रियसभाकी सदस्य कोमल वलीले आफ्नो पार्टीभित्रको घरझगडालाई विषय बनाउँदै सोमबार कविता वाचन गरिन् ।
राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा लिखित सम्बोधन गरेकी वलीले दोस्रो विश्व युद्धमा वीरता देखाएका नेपाली युवा अहिले खाडीमा पसिना देखाइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
विदेशको ग्रिनकार्ड र पीआर पाउँदा नेपालको नागरिका त्याग्न तयार हुने गरेको भन्दै युवाहरूको देशभक्तिप्रति प्रश्न उठाइन् । सबै विकृति यो तीन वर्षको सरकारले बोक्न सक्दैन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षा गरिन् ।
सम्बोधनकै क्रममा उनले नेपालका नेताहरूलाई प्रजातन्त्र अपच भएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । भनिन्, ‘के नेपालका नेताहरूलाई प्रजातन्त्र अपच भएकै हो ? जनताको नासो जनतालाई बुझाउने अप्रजातन्त्रिक हुने, तर सिंहदरबार लुटेर खाने प्रजातान्त्रिक हो ? ’
त्यसपछि उनी आफ्नो पार्टीभित्रको घरझगडमा प्रवेश गरिन् । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन र अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपालको आलोचना गरिन् । यो यस्तो प्रवृत्ति संसदीय व्यवस्था अनुकूल हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन् ।
कविताको सहारा लिएर उनले एमाले भित्रको घरझगडाको थप व्याख्या गरिन् । कसैको नाम नलिकनै वाचन गरिएको कविताको भाव पनि नेता नेपाल लक्षित छ । उनले यसलाई ‘बाँदर प्रवृत्ति’सँग दाँजेकी छन्।
‘बाँदरको जमात र अमृतापनको सपना’ शीर्षकको कवितामा कोमलले भनिन्:
कहिले मिलेका छन्, कहिले फुटेका छन् ।।
ईर्श्या भट्टीमा आफैंलाई भुटेका छन् ।।
आँखाभरी लोभ पापको पिपासा बोकेर आजकाल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशाको मेलामा जुटेका छन् ।।
हालेको जग बचाएको भए सुन्दर घरबास बन्न सक्थे।।
आखिर बाँदर न हुन, भोलिको प्रतीक्षा कहाँ गर्न सक्छन् ।।
बाँदरहरू खेती गदैनन् बाली विनास गर्छन् ।।
कहिले ढेडुहरूसँग मिल्छन्, कहिले गोइलानहरुसँग मिल्छन् ।।
कर्मको कुटो नलगाउने यी बाँदरहरू अमृतपान गर्ने सपाना देख्छन् ।।